Orinasa lehibe eo amin'ny fizahantany ny filokana
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Orinasa lehibe eo amin'ny fizahantany ny filokana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News
Ny indostrian'ny filokana, izay tena goavana manerantany, dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny resaka fizahan-tany. Izany no mahatonga ny fizahan-tany casino ho zavatra lehibe ankehitriny.
Firenena maro no namorona trano filokana goavambe any amin'ny faritra maro ao anatin'ny fari-taniny mba hahafahan'ny mpizahatany maro hiditra. Mazava ho azy fa ny tontolon'ny fizahan-tany matanjaka kokoa dia tsara ho an'ny toekarena satria tsy vola ihany no ampidirina eto fa koa fanekena bebe kokoa ary mety ho mpampiasa vola. .
Ity misy fijerena ny fiatraikan'ny filokana amin'ny fizahan-tany sy ny fomba anampian'izy ireo amin'ny toekarena ankapobeny an'ny firenena.
Porofon'ny fifandraisan'ny Casino sy ny fizahantany
Amin'ny alàlan'ny fijerena ireo filokana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ihany, dia azontsika atao ny mandinika ny fomba mampiroborobo ny fizahan-tany amin'ny casino any amin'ny firenena sasany. Ireo firenena ireo dia misy an'i Etazonia, Macau, ary Aostralia. Mba hanomezana hevitra anao fotsiny, Las Vegas, Nevada fotsiny dia afaka nitondra mpizahatany 40 tapitrisa mahery tamin'ny taona 2016. Ary tsy dia mahagaga loatra izany satria i Las Vegas no toerana tokony haleha raha te-hahazo vola casino be dia be ianao mahafinaritra Azo antoka fa manintona ireo mpizahatany ihany koa ireo fizahan-tany fizahan-tany sy ireo jiro tsara tarehy. Na izany aza, ny traikefa filokana sy ambiansy amin'ny ankapobeny no tena mampiditra azy ireo.
Ny mpifaninana matanjaka ao Las Vegas dia tsy iza fa i Macau, izay faritra ao amin'ny faritanin'i Shina izay nanjary iray amin'ireo filokana lehibe indrindra manerantany. Macau dia nanjary goavambe tokoa tamin'ny indostrian'ny filokana ka afaka nahatratra an'i Las Vegas tamin'ny tapakila filokana aza izy ireo tamin'ny 2010. Toy ny tany Vegas, Macau koa dia nampifantoka ny ezak'izy ireo amin'ny fanomezana ny mpanjifa lafo vola amin'ny serivisy VIP. Anisan'izany ny tombontsoan'ny mpikambana volamena, ny efitrano filokana tsy miankina, ny fampitaovana mahavariana ary maro hafa. Io dia nahafahan'izy ireo nitondra mpizahatany manankarena be tamin'ny taona 2013. Ny rollers avo lenta dia nahatratra 66% tamin'ny tombom-barotra amin'ny ankapobeny casino tamin'io taona io. Mazava ho azy, ity fiakarana tampoka ity dia najanona kelin'ny 2014 tamin'ny famoretana fanoherana ny kolikoly nataon'ny governemanta Xi Jinping. Farany dia afaka nilamina i Macau satria nikendry ny tsena marobe ihany koa ny casino fa tsy ny rollers ambony fotsiny.
Na dia afaka nihazona ny taniny aza ny casino Macau, dia mpiloka sinoa maromaro no tsy afa-po. Izany no nahatonga azy ireo nankany Australia fa tsy. Noho ny fivoaran'ny kasino any Aostralia dia manodidina ny 1 tapitrisa amin'ireo mpiloka sinoa ireo no nifindra tany Aostralia. Raha ny marina, ny filokana dia nanjary iray amin'ireo manintona lehibe indrindra any Aostralia na dia Vegas sy Macau aza miaraka amin'ireo mpitsidika 10 tapitrisa tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ary tsy ireo firenena vaventy ireo ihany no nahita fiakarana amin'ny sehatry ny fizahan-tany ataon'izy ireo noho ny filokana. Ny firenena kely kokoa toa an'i Singapore, Filipina, Monaco, ary Kambodza dia samy nirehareha tamin'ny vola azo avy amin'ny mpizahatany mitsidika ireo firenena ireo hilalao amin'ny filokana. Ny fitomboan'ny indostrian'ny filokana any amin'ireo firenena ireo dia efa afaka manome antsika ny hevitra momba ny fiantraikan'ny filokana amin'ny fizahan-tany amin'ny firenena.
Ny fiantraikan'ny fizahan-tany amin'ny Casino amin'ny indostria hafa
Ny zavatra lehibe momba ny fizahan-tany casino dia ny ahafahany mitondra olona marobe avy amin'ny firenena samihafa ary mampifantoka azy ireo amin'ny toerana iray. Satria betsaka ny olona manodidina ny filokana, ny indostria hafa koa dia afaka mandray soa amin'izany. Ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia iray amin'ireo izay tena mandray soa avy amin'ny fizahan-tany casino. Raha misy trano filokana dia matetika misy hotely, trano fandraisam-bahiny ary trano fisakafoanana. Izany no antony fahita matetika ny fiaraha-miasa eo amin'ny trano fandraisam-bahiny, trano filokana ary trano fisakafoanana.
Tsy ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana ihany no hiroborobo, fa na ireo toerana fizahan-tany hafa aza manodidina azy koa. Ny trano fisakafoanana ao an-toerana dia hahazo mpitsidika vahiny izay avy amin'ny filokana. Afaka nanandrana ny nahandro teo an-toerana ireto vahiny ireto avy eo. Ity dia mitondra anjara biriky bebe kokoa amin'ny fizahan-tany ao amin'ny firenena.
Amin'ny lafiny iray, ny fizahan-tany casino dia mamporisika ny fahasamihafana ihany koa. Izany indrindra no nitranga taorian'ny famoretan'ny kolikoly an'i Macau. Nanapa-kevitra ny governemanta Sinoa fa hampivady ny Macau mba hahatonga azy io ho bebe kokoa noho ny foibe filokana fotoana lehibe toa ny fantsakan'ny lakandranon'i Venise lehibe.
Azontsika atao koa ny mahita ohatra toy izany any Singapore- ny iray amin'ireo trano filokana lehibe indrindra ao aminy, Resortsworld, dia miorina ao Sentosa akaikin'ny toerana fizahan-tany hafa eo akaikin'ny helodrano Sentosa. Noho izany, mpiloka marobe koa no efa mitsidika ireo toerana fizahan-tany any an-toerana. Ary farany, i Manila dia nankafy fizahan-tany matanjaka ihany koa noho ny fisian'ireo filoham-pirenenan'izy ireo mifantoka amin'ny faritra iray.
Amin'izany dia hitantsika fa ny toerana misy azy ireo no ilaina raha misy firenena te-hanao fahombiazan'ny fizahan-tany fizahan-tany. Amin'ny alàlan'ny toerana stratejika sy ny varotra midadasika, ny casino dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fizahan-tany ary koa misy akony amin'ny indostria hafa sy ny toekarena amin'ny ankapobeny.
Ny fisian'ny mpiasa any ivelany
Ny fisian'ny vahoaka maro karazana dia misy koa ny fisian'ny mpiasa any ivelany. Andao horaisintsika ohatra ny kasino Aostraliana. Noho ny firoboroboan'ny sinoa avo rollers ao amin'ny trano filokana misy azy ireo dia nitombo ihany koa ny fangatahana mpivarotra miteny Mandarin. Ny ataon'ny casino sasany dia ny fampiasany mpiasa izay miteny Mandarin na mpiasa avy any amin'ny firenena miteny Mandarin toa an'i Taiwan. Io dia ahafahan'ireo sinoa avo rollers mahatsapa ho ao an-trano bebe kokoa ao amin'ny casino, ka mamporisika azy ireo hitondra mpiloka sinoa bebe kokoa hilalao.
Fiantraikany amin'ny tsenan'ny sisin-tany
Fantatsika rehetra fa misy ny firenena sasany manao lalàna tsy ara-dalàna. Mazava ho azy fa tsy mahasakana ny olom-pirenena te hiloka izany. Ny zavatra hataon'izy ireo dia ny fitsangatsanganana any amin'ny firenena akaiky azy ireo izay manara-dalàna ny filokana na mitady ny lisitry ny casino an-tserasera PayPal ahafahan'izy ireo mifanakalo sy miloka amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Amin'ny fanomezana zavatra tadiavin'ny mponina ao amin'ny firenena iray izay tsy azon'ny tanindrazany omena azy, dia hanokatra tsena vaovao hahazoana fotoana mety ianao amin'ny alàlan'ny fanaovana izany "faniriana" izany ho mora azo.
Ireo teboka rehetra ireo dia hampiseho fa misy tokoa ny fifandraisana eo amin'ny casino sy ny fizahantany amin'ny ankapobeny. Amin'ny alàlan'ity fifanakalozan-kevitra ity dia afaka milaza tokoa isika fa ny indostrian'ny casino dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny toe-java-misy fizahan-tany amin'ny toekarena. Mazava ho azy, misy ny olan'ny toekarena miantehitra be loatra amin'ny indostrian'ny filokana hanintonana mpizahatany.
Izany no mahatonga ny firenena maro hanamora ny fizahantany sy mametraka toerana fizahan-tany isan-karazany eo akaikin'ny trano filokana. Izany dia hanome ny mpiloka vahiny hanana antony hijerena kely sy hijerena ireo toerana hita maso. Izany dia handrisika azy ireo haniry hiverina any an-tanindrazana bebe kokoa raha efa marary amin'ny casino izy ireo. Tena olana teo amin'i Macau izany satria tsy tena nanana hirehareha i Macau afa-tsy ny casino misy azy ireo. Izany no antony nandosiran'ny mpanjifa maro be tany Aostralia taorian'ny famoretana. Na izany aza, nanapa-kevitra ny governemanta sinoa fa te-hihamaro izy ireo mba hisarihana ny tsena hafa ankoatry ny vato avo. Iray amin'ny fomba iray izay mitarika amin'ny fanamafisana an'i Macau izany.
Na dia azo antoka aza fa mampiroborobo ny fizahan-tany ny filokana dia tsy tokony ho izany irery no antony fitomboan'ny fizahan-tany amin'ny firenena. Izy io dia tokony ho iray amin'ireo antony namenan'ny manintona hafa izay mety hahatonga ny mpizahatany te hiverina hatrany.
Azo zahana amin'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny ...